303810 17344 286466
मुलुकभर दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या न्यून, उपत्यकामा निरन्तर बढ्दो
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड–१९ संक्रमण पुष्टि भएदेखि रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले करिब चार महिनादेखि लकडाउन जारी राखेको छ । यसरी गरीएको लकडाउनको दुई महिनासम्म कोरोना संक्रमितको संख्या न्यून थियो । तर पछिल्लो दुई महिनामा भारतबाट नेपाल
कोरोनाबाट काठमाडौं उपत्यकामा मृत्यु हुनेको संख्या ५ पुग्यो, सिन्धुपाल्चोकमा २
काठमाडौं । संघीय राजधानीमै कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण हालसम्म ५ जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लोपटक काठमाडौंमा उपचाररत मिर्गौला रोगका २ बिरामीसहित सिन्धुपाल्चोकका १ पुरुषको मृत्यु भएको हो । यससँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३८ पुगेको छ
बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चन र अभिषेकलाई कोरोना पुष्टि
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चन र उनका छोरा अभिनेता अभिषेकलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । अभिषेकले आफ्नो आधिकारिक ट्विटरमार्फत् आफू र बुवालाई कोरोना सङ्क्रमण भएको जानकारी दिएका छन् । उनीहरु दुवैजनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका
काठमाडौं । नेपाल प्रेस युनियनले कोरोना महामारीको बेला अग्रपंक्तिमा खटिने सञ्चारकर्मीहरुलाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको छ । नेपाल प्रेस युनियका अध्यक्ष बद्री सिग्देलको सभापतित्वमा युनियनको प्रकाशन विभागले गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशरण महतले स्वास्थ्य सामग्री वितरण
काठमाडौं । नेपालका छ जिल्ला कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रवक्ता प्राडा गौतमका अनुसार धनकुटा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, मनाङ र हुम्लामा सक्रिय सङ्क्रमित छैनन् । यस्तै प्रदेश नं १ का क्वारेन्टाइनमा दुई हजार ७७४, प्रदेश नं २
काठमाडौं । भारतमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या आठ लाख भन्दा बढी पुगेको छ । शनिबार विहान सरकारी अधिकारीहरुले दिएको जानकारी अनुसार भारतमा अहिलेसम्म आठ लाख २० हजार ९१६ जना सङ्क्रमित भएका छन् । ती मध्ये २७ हजार ११४ जना पछिल्लो
कोभिड-१९ बाट विश्वभर एक करोड २६ लाख ५३ हजार सङ्क्रमित
काठमाडौं । विश्वभर कोभिड–१९ बाट विश्वभर एक करोड २६ लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका र पाँच लाख ६३ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको जोन हकिन्स विश्वविद्यालयद्वारा सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त विश्व विद्यालयको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर ७३ लाख ८७
काठमाडौंमा आज ३ जना संक्रमित थपिए, २ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । काठमाडौंका २ सहित नेपालमा कोरोनाबाट थप ३ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं ठेगाना भएका २ र सिन्धुपाल्चोकका एक पुरुषको मृत्यु भएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका १० शंंखमूलका
कोरोनाका कारण एकै दिन ३ जनाको मृत्यु, कूल संख्या ३८ पुग्यो
काठमाडौं । नेपालमा एकैदिन ३ जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ । यो सँगै कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या ३८ पुगेको छ । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १६ हजार ७१९ पुगेको छ । आज ७० जना थपिएका छन् । शुक्रबार
थपिए ७० नयाँ संक्रमित, नेपालमा कोरोनाबाट निको हुनेहरुको संख्या ८,४४२ पुग्यो
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १६ हजार ७१९ पुगेको छ । आज ७० जना थपिएका छन् । शुक्रबार ११८ जना थपिएका थिए । विहिबार १०८ जना थपिएका थिए । बुधबार २५५ जना थपिएका थिए । यस्तै निको हुनेको संख्या
अब शुल्क तिरेर कोभिड-१९ परीक्षण गराउन पाइने
काठमाडौं । सरकारले अबदेखि सातै प्रदेशमा शुल्क तिरेर कोभिड–१९ को पिसिआर विधि परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले सरकारकै प्रयोगशालामा निर्देशिका भन्दा बाहेकका मानिसले आफूलाई इच्छाएको बेला शुल्क तिरेर नमूना परीक्षण
काठमाडौं । शुक्रबार नेपालमा १ सय १८ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार देशका विभिन्न २५ वटा प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा १ सय १८ जना संक्रमित थपिएका हुन् । आज मात्रै काठमाडौं उपत्यकामा ४२
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १६ हजार ६४९ पुगेको छ । आज ११८ जना थपिएका छन् । विहिबार १०८ जना थपिएका थिए । बुधबार २५५ जना थपिएका थिए । यस्तै निको हुनेको संख्या ८ हजार ११ जना पुगेको छ
काठमाडौं । इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकाका पाँच हजार मानिसको कोभिड–१९ को पिसिआर परीक्षण गर्नका लागि नमूना सङ्कलन गरेको छ । बिहीबारदेखि महाशाखाले उपत्यकाका अस्पताल, बैंक, मालपोत, नापी–यातायात कार्यालय जस्ता मानिसको बढी भीडभाड हुने ठाउँमा पुगेर नमूना
काठमाडौं । आज काठमाडौंमा ५ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । यस सँगै उपत्यकामा संक्रमितको संख्या २९५ पुगेको छ । काठमाडौंमा २०४, ललितपुरमा ४८ र भक्तपुरमा ४३ सहित अब उपत्यकामा २९५ संख्या पुगेको हो । यस्तै बिहीबार नेपालमा १ सय
काठमाडौं । बिहीबार अपराह्नसम्म प्राप्त समाचार अनुसार कोरोना भाइरसका कारण बिरामी भएका ७० लाख ७१ हजार ४६७ जना व्यक्ति निको भएर फर्केका छन् । कोरोनाबाट विश्वभर मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या ५ लाख ५२ हजार १६४ पुगेका बताइएको छ । साथै
सुर्खेत । कर्णालीमा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आएको छैन । दिनहुँ सङ्क्रमित बढिरहे पनि भौतिक दूरी कायम गरेर दैनिक कामकाज गर्न सरकारले दिएको निर्देशनप्रति सर्वसाधारणले ध्यान दिएको देखिँदैन । यसले गर्दा पनि कोरोना सङ्क्रमण हुने सङ्ख्या नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।
विराटनगर । प्रदेश नं १ मा १७ जना कोभिड–१९ सङ्क्रमित थपिएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार बुधबार मोरङका तीन, झापाका सात र सुनसरीका दुई, तेह्रथुमका एक, ताप्लेजुङ र इलाममा दुई/दुई जनामा नयाँ सङ्क्रमण देखिएको हो । मोरङको लेटाङमा एक
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा २३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा १६ र ललितपुरमा ७ जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको हो । भक्तपुरमा भने संक्रमित देखिएका छैनन् । हाल सम्म काठमाडौं
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमितको थुकको छिटा वा हाच्छ्यूँ गर्दा निस्कने छिटाबाट मात्र होइन अब हावाबाट पनि सर्न सक्ने चेतावनी विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई ३२ देशका २३९ जना वैज्ञानिकले गरेको अध्ययन अनुसन्धानबाट कोरोना भाइरस हावाबाट
काठमाडौं । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) मुलुकमध्ये नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) परीक्षणको स्थिति राम्रो रहेको पाइएको छ । प्रति दशलाख जनाको पीसीआर परीक्षणमा सार्कका अन्य मुलुकभन्दा नेपालको परीक्षण दायरा अगाडि रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर
आज काठमाडौं उपत्यकामा २३ जना संक्रमित थपिए
काठमाडौं । आज काठमाडौं उपत्यकामा २३ जना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज काठमाडौंमा १६ र ललितपुरमा ७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो । काठमाडौं उपत्यकामा हाल सम्म २९० जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । त्यसमध्ये १९१ काठमाडौंका,
थपिए २५५ नयाँ संक्रमित, नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १६,४२३ पुग्यो
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १६ हजार ४२३ पुगेको छ । आज २५५ जना संक्रमित थपिएका छन् । मंगलबार २०४ जना थपिएका थिए । सोमबार १८० जना थपिएका थिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौत्तमले यसको
काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउन खुकुलो भएसँगै नेपालमा २३ दिनमै संक्रमित ह्वात्तै बढेको छ । नेपालमा दुई जना मात्रै संक्रमित हुँदा सरकारले गत चैत ११ देखि लकडाउनको घोषणा गरेको थियो
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) यतिबेला विश्वभरी नै माहामारीको रुपमा फैलिएको छ । यसरी माहामारीकै रुपमा दिनप्रतिदिन संक्रमितको सङख्या पनि बढ्दै गएको छ । संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरु पनि बढिरहेका छन् । यो कोरोनाको माहामारीबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । त्यसैले
काठमाडौं । विश्वभर कोभिड–१९ का कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पाँच लाख ४६ हजार ६०१ पुगेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक करोड १९ लाख ४९ हजार २८१ पुगेको छ । त्यस्तै निको हुनेको सङ्ख्या ६८ लाख ९५
बेइजिङ । बेइजिङले शहरको प्रमुख थोक खाद्य बजारमा जुन ११ मा पुनः कोभिड–१९ सङ्क्रमित भेटिएपछि पहिलोपटक विगत २४ घण्टामा कुनै नयाँ सङ्क्रमित नभेटिएको जनाएको छ । बेइजिङको स्वास्थ्य आयोगले दिएको जानकारीमा जुन ११ पछि सिनफादी बजारसँग जोडिएर सङ्क्रमित विरामीहरू भेटिने
नेपालमा ९९ प्रतिशत कोरोना सङ्क्रमित लक्षणविहीन
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण भएका मध्ये ९९ प्रतिशत कोरोना सङ्क्रमितमा कुनै पनि लक्षण नदेखिएको पाइएको छ । महाशाखाका निर्देशक डा. बासुदेव पाण्डेले सङ्क्रमित देखिएका झण्डै १६ हजारमध्ये केहीलाई मात्र सामान्य लक्षण देखिएको बताए । “अन्य देशको भन्दा फरक के
काठमाडौंमा ‘कोरोना समुदायमा आउन सक्छ’
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस समुदायस्तरमा फैलने जोखिम अधिक रहे पनि हालसम्म समुदायस्तरमा कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिइनसकेको जनाएको छ । इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा वासुदेव पाण्डे छिट्फुट रुपमा देखिए पनि समुदायमा कोरोना नफैलिएको बताउँछन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या